UNIGINE ichangobva kuvandudzwa nerutsigiro rweVR paLinux uye Vulkan | Linux Vakapindwa muropa
UNIGINE achangobva kuzivisa kugadzirisa kweiyo Superposition bhenji chishandiso iyo inofambiswa neiyo UNIGINE 2 injini. Ichi chigadziriso chakaziviswa muna Kubvumbi 12, uye ikozvino tine mhedzisiro uye nerinonakidza ruzivo nezve shanduko dzakatangwa nevagadziri mune ino turu. Superposition benchmark 1.1 ikozvino inosanganisira yekudyidzana nzira yemahara VR (chaiyo chaiyo), chimwe chinhu chinotyisa kwazvo tichifunga kuti mune dzeshanduro dzekare waifanira kuribhadharira.
Iyi zvakare ine rutsigiro rweHMD dzakawanda, kusanganisira Steam vr Valve, iyo yatatotaura nezvayo muLxA. Uye zvinonyanya kukosha kune ino blog, kuti izvozvi vhezheni itsva inosanganisira rutsigiro rwevashandisi veLinux vanoda kunakidzwa neichi chaicho maficha. Asi ichi handicho chega chinhu chakakosha chinoonekwa mumanotsi pane kuburitswa kweshanduro iyi, pane zvimwe zvatichaudza zvinotevera ...
Pamusoro pezvo, kunatsurudzwa kwakakosha kunosanganisirwa nekuonekwa kwema algorithms nehurmware uye nerutsigiro rwezvimwe zvakakwirira resolution kuratidza, senge 16384 × 16384 px, hutsinye chaihwo. Izvi zvinonakidza uye zvirokwazvo inzira yakanaka yekuratidzira kugona kukuru padanho reboka reUNIGINE. Ehezve, sekutaura kwandataura mumusoro wenyaya, zvakare unosanganisira rutsigiro rweiyo inoshamisa graphical API, uye yatakanyorawo zvakawanda nezve pano: Vulkan.
Nenzira, kunze kweiyo Superposition chishandiso, kuona mashandiro eiyo Hardware yePC, ndinofanira kutaura, kune avo vasati vachizviziva izvo, kuti UNIGINE 2 ine injini ine simba yemifananidzo yechokwadi chaiyo uye vhidhiyo mutambo wemashandisirwo ayo anokwanisa kushanda mu3D munguva chaiyo paWindows uye GNU / Linux mapuratifomu. Unogona kuona rumwe ruzivo uye mhedzisiro yekugona kwaro mu iyo yepamutemo webhusaiti yeiyi yeRussia UNIGINE Lab chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » UNIGINE ichangobva kuvandudzwa nerutsigiro rweVR paLinux neVulkan